Thwebula Dolphin 4.0.2 futhi 4.0.8700 rc – Vessoft
Le software adingekayo DirectX ukugijima kahle
Dolphin – a isofthiwe ukuze impindakudlala isibalo esikhulu imidlalo ezivela udlala aduduze of GameCube and Wii. Isofthiwe ikuvumela ukuba impindakudlala imidlalo e-HD nokunciphisa ulwelwe image. Usebenzisa module eyakhelwe-ku, Dolphin ezithuthukisa yokwenza in 3D computer ihluzo esindisa imininingwane kwezithombe. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ikhompyutha ikhibhodi ngaphansi izidingo yokudlala futhi usebenzise ehlukile game abalawuli. Isofthiwe has a esibonakalayo elula futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukudlala imidlalo GameCube and Wii kwikhompyutha yakho
Support for game inthanethi
Improved izinga image
Support for ezahlukene game abalawuli
Amazwana on Dolphin:
Dolphin Ahlobene software:
Emulators Enye yezinto emulators eziholayo PlayStation game Portable console. Isofthiwe isekela imidlalo eminingi futhi service nokuphathwa PlayStation Network.
English, Українська, Français, Español... BlueStacks App Player 2.5.83.6332
XnView 2.39 Standard, Extended futhi Minimal
English, Afrikaans, Українська, Français... Scilab 5.5.2
Isithombe I enamandla ihluzo umhleli ukusebenza nge Umdwebo digital. Isofthiwe ine amathuluzi amaningi kanye izici ukudala umsebenzi wobuciko professional.